Etu aga esi egbochi mkpọchi mkpọchi na iPhone [Ihe gafere nke ọma]
Olee otú Iji gabiga mkpọchi mkpọchi na iPhone
Emelitere ikpeazụ na Disemba 8, 2020 nke Jack Robertson dere
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịzụta iPhone ma ọ bụ iDevices ndị ọzọ nwere ọnụahịa dị ezigbo ụtọ. Agbanyeghị, ọ na-abịa n'ihe egwu, yana mkpọchi mkpọchi bụ otu n'ime ihe egwu ndị a.
Ozugbo i nwere ihe iPhone na ebighị mkpọchi, i nwere ike iji iPhone ọzọ ebe ị na-kpamkpam ekpochi ya. Iji na-uru nke iPhone, anyị kwesịrị iji wepu ma ọ bụ uzo ebighị mkpọchi.
Iji wepu ma ọ bụ bufee mkpọchi Mkpọchi, anyị ga-amatarịrị ihe mbụ. Mgbe ahụ, anyị ga-elekwasị anya na ụfọdụ ụzọ enwere ike.
Gịnị bụ mkpọchi mkpọchi
1zọ XNUMX Wepu mkpọchi mkpọchi ya na Apple ID na Paswọdu
Usoro 2 Wepu mkpọchi mkpọchi ya na koodu passcode
3zọ 4 Gbanyụọ mkpọchi agagharị site na Tenorshare XNUMXMekey na-enweghị Paswọdu na onye nwe ya gara aga
Mkpọchi Mkpọrọ bụ atụmatụ nchekwa nke Apple Inc. mebere iji chebe iDevice site na efu na izu ohi. Mkpọchi Mkpọchi ga-eme ga-abụ ihe ngagharị site na ihe nkesa Apple site na Ndenye aha Apple n'okpuru ọnọdụ abụọ a:
Otu iPhone na-efu ma ọ bụ zuru ya Chọta My iPhone nyeere.
Onye nwe iPhone nwere ike iji aka ya mee ngwa ngwa na ngwa ngwa site na iCloud mgbe ngwaọrụ zuru ma ọ bụ zuru. Onye ọ bụla hụrụ ma ọ bụ zuru ohi na iPhone enweghị ike ịnweta ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe, n'ihi na mkpọchi ahụ nwere ike idozi naanị site na ịbanye Apple ID na paswọọdụ edebanyere.
Onye bụ iPhone tọgharịa kpamkpam.
Nọmalị, anyị nwere ike tọgharịa ihe iPhone kpamkpam na iTunes & iCloud ma ọ bụ site na iPhone Ntọala. The Apple nkesa na-agaghị ịkpalite ebighị ebighị mgbe Apple ID na-ewepụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmadụ resets iPhone na programmụ na-abụghị Apple, ihe Apple ID ga-akacha adịgide. Ihe nkesa Apple ga - achọpụta nrụpụta ezughị ezu ma kọwaa ya dị ka ihe enyereghị iwu, Ọzọkwa, Ihe nkesa Apple ga - eme ka mkpọchi mkpọchi na - akpaghị aka site na Apple ID nọgidere.
Ugbu a ị maara ihe mkpọchi mkpọchi, yana otu esi ebute ya. Ọzọ, anyị ga-aga otu esi agabiga ya.
Ọ bụrụ n ’inwetara iPhone ejiri gị na Mkpọchi mkpọchi, ị nwere ike gwa onye nwe ya ka o wepu ya maka gị.
N’etu obi, onye nwe ya dị nso, nye ya ngwaọrụ ahụ ma gwa ya ka ọ pịnye NJ na okwuntughe. Mgbe mwepu mkpọchi mkpọchi rụọ ọrụ, rịọ onye nwe ya ka ọ bịanye aka na Apple ID gị, gaa Ntọala> Apple ID taabụ, na Kpatụ Banye Aha.
Ma ọ bụ, onye nwe ya nọ gị anya, ị nwere ike ịrịọ ya / ya ka imepee iPhone site na iCloud. Nwere ike igosi onye nwe ya usoro ndị a.
Nzọụkwụ 1 Banye iCloud.com
Tinye Apple ID na paswọọdụ gị iji banye na iCloud.com.
Kwụpụ 2 Gbanyụọ ngwaọrụ
Na iCloud.com, gaa ngwaọrụ, wee pịa akara ngosi nke ngwaọrụ ahụ. Họrọ Kpochapụ iPhone.
Nzọụkwụ 3 Wepu ngwaọrụ ahụ na akaụntụ Apple
Mgbe iCloud kpochapụrụ ngwaọrụ ahụ, pịa Wepu Akaụntụ.
Mgbe usoro 3 ahụ gasịrị, onye nwe ya nwere ike inyere gị aka ị kpọghee ngwaọrụ ahụ.
Kedu ihe ị ga - eme mgbe ị na - enweghị ike ịkpọtụrụ onye nwe ya?
Were ihe niile nwere ike gosi na ị bụ onye nwe ya ugbu a nke iPhone, dị ka - ego, nọmba IMEI ma ọ bụ nọmba Oghere Usoro ahụ, ma gaa na Applelọ Ahịa Apple dị na mpaghara. Storelọ ahịa Apple ga-ewepụ mkpọchi mkpọda n'efu mgbe ị gosiputara onwe gị na ọ bụ onye nwe iPhone.
Method 2 uzo ebighị mkpọchi na ihuenyo passcode
Ọ bụrụ na ị mara ma ọ bụ cheta passcode ihuenyo gara aga tupu iPhone na-tọgharịa, ị nwere ike wepu ebighị mkpọchi na passcode ihuenyo mbụ.
Nzọụkwụ 1 Ike na iDevice
Wepu iPhone nke nwere mkpọchi Mgbapụta, gbanye ya.
Nzọụkwụ 2 Un kpọghee ekwt na aga na passcode
Ọ bụrụ na ị bụ onye tọgharịa iPhone na mmemme na-abụghị nke Apple, ịnwere ike wepu Mkpọchi mkpọchi na mbụ mkpọchi ihuenyo passcode.
Na ebighị mkpọchi ihuenyo, ị na-kwes tor to ịhụ otu nhọrọ “Kpọghe na koodu passcode“. Nke a bụ nhọrọ maka ndị na-echefu paswọọdụ ha ma cheta passcode ihuenyo iji kpọghee iPhone.
Kpatụ nhọrọ ahụ, tinye akara ngosi ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ nwere tupu nrụpụta. Mgbe ahụ, a ga-edozi mkpọchi ahụ, ịnwere ike ịmaliteghachi na iPhone.
Method 3 uzo ebighị mkpọchi site na iBypasser enweghị Paswọdu & Nke gara aga nwe
Nwekwara ike itinye na ngwanrọ ndị ọzọ iji mechie mkpọchi mkpọda. Ka ọ dị ugbu a, enwere mmemme ole na ole ga - enyere aka ịkwụsị mkpọchi mkpọchi, Tenorshare 4Mekey bụ otu n'ime ha.
4Mekey ga-ewepụ ngwaọrụ gị ma gbusịa ya, iBypasser ga-amalite igbachasị mmekọrịta dị n'etiti iPhone na sava Apple.
N'ụzọ nke a, ebighị mkpọchi ga-egbochi na i nwere ike iji iPhone kwesịrị.
Site na mgbalị iBypasser, mkpọchi mkpọchi ga-egbochi gị ma ị nwere ike ịnweta iDevice.
Ugbu a, ka anyị hụ otu ị ga-esi gbue mkpọchi mkpọchi yana 4Mekey.
Nzọụkwụ 1 Download 4Mekey na Windows gị
Nzọụkwụ 2 Ẹkedori software
Ẹkedori ya, pịa Malite, na 4Mekey ga egosiputa ihe egwu di na ịgafe mkpọchi mkpọchi, tinye akọrọ Agụwo m ma kwekọrịta nkwekọrịta ahụ mgbe odi mma na nsonazụ ya.
Jikọọ iPhone na PC gị na eriri USB.
Nzọụkwụ 3 Jailbreak ngwaọrụ gị
On 4Mekey si interface, na-eso onscreen ntụziaka na jailbreak gị iPhone ngwaọrụ.
pịa Jailbreak Nkuzi gụọ akwụkwọ ntuziaka usoro maka ụzọ esi ejide gị iPhone.
Nzọụkwụ 4 uzo ebighị mkpọchi ihuenyo
Mgbe ịmechara ngwaọrụ gị, pịa Malite Wepụ na 4Mekey. ọ ga-ntabi-amalite uzo ebighị ebighị mkpọchi.
Usoro a ga-ewe naanị obere oge iji wuchaa.
Mgbe usoro a mechara, pịa ime eme, ebighị ebighị mkpọchi gị iPhone ga-nkwarụ. Nwere ike ugbu a melite gị iPhone na-eji ya.
Mgbe emechiri mkpọchi, iPhone Onweghi ike ịchọputa ma jiri kaadi SIM, ya mere, gị enweghị ike iji iPhone kpọọ ekwentị ma ọ bụ zipu ozi ederede. Ma ị ka nwere ike jikọọ na ngwaọrụ gị na a WiFi netwọk.
Mgbe ịmechara usoro a, ị nwere ike banye na Apple ID gị na App Store na budata ngwa. Ma ị enweghị ike iji iCloud ọzọ.
Ebugharị Mkpọchi ihuenyo ga-apụta ọzọ ma ọ bụrụ na ị tọgharịa ngwaọrụ gị mgbe gafere. Nwere ike iji 4Mekey ka uzo ọzọ.
Ugbu a, ị maara otú uzo ma ọ bụ wepu ebighị mkpọchi na gị iPhone enweghị a paswọọdụ ma ọ bụ gara aga nwe enyemaka, gbalịa idozi nsogbu na gị onwe gị. Na olileanya, ị nwere ike unlock kpọghee ekwt ya na-enwe oge na gị iPhone.
Unlock Disabled iPhone, Wepu passcode ihuenyo, wepụ Apple ID, na Wepụ ScreenTime.
I Nwere Ike Readgụ
Chefuru Mmachi passcode
Wepụ iPhone ihuenyo Oge Paswọdu
Tọgharia iPhone Amachibido passcode